Alarobia, Aprily 19, 2017 Frida Cooper
Ny E-Commerce dia mandray ny indostrian'ny mpivarotra isa-minitra. Vao mainka mihasarotra ny mitazona ny fivarotana biriky sy laona. Ho an'ny magazay biriky sy feta, tsy ny fanangonana tahiry sy fitantanana kaonty sy fivarotana izany. Raha manana fivarotana ara-batana ianao dia mila mandroso amin'ny dingana manaraka. Omeo antony maharesy lahatra ireo mpiantsena handany ny fotoanany hidina ao amin'ny fivarotanao. 1. Omeo traikefa fa tsy vokatra fotsiny